China SLA-310 Round Bhodhoro Vertical Labeling Machine Manufacture and Factory |S-conning
Vertical feeding uye Labeling System
S310Vertical feeding uye Labeling System Yakakodzera: otomatiki kunyora pacylindrical packaging midziyo mumishonga, makemikari emazuva ese, uye maindasitiri ezvekudya.
-Manual yakazara tireyi yakatwasuka kurodha, kana kunyange otomatiki kuendesa uye kunyora mumutsetse wekuzadza.
-Vertical high-speed yekuronga turntable.
-Kudyisa kwakamira kunoita kuti zvive nyore kuisa mumidziyo, kuderedza zvakanyanya kusimba kwevashandi uye kuvandudza kushanda zvakanaka.
-Mavhaira kana mamwe madhayamita: Ф20-90mm, kureba: 30-200mm diki denderedzwa bhodhoro zvimiti zvinotenderedzwa zvinogona kuve neaya yekudyisa turntable (optional) kuona yakamira yakakura-yekudyira uye kuendesa.
Screw bottle divider: Iyo screw inoparadzanisa mabhodhoro panguva dzakaenzana uye inopinda muchiteshi chekunyora;iyo nyeredzi roller uye bhodhoro rinomonereka bhandi rinoisa matatu-mitsara yekumisikidza yebhodhoro muviri kuti ive nechokwadi chekunyora mazita;vertical labeling inogona kupedzisa inkjet, kuona inkjet, Kushaikwa kwemavara ekuona, kurambwa kwezvigadzirwa zvisina kukodzera, nezvimwe.
Reeling bhandi: Inotyairwa nemota yakaparadzana uye inogona kuchinjika isina nhanho ne frequency kutendeuka.
Nekumhanya kwekunyora, kunyora kwacho kwakanaka uye hakuna kuunyana, uye kwakagadzirirwa kudzivirira zvinobudirira matambudziko akadai sekushaikwa, kukanganisa, uye kunamira zvakare izvo zvinogona kukonzerwa neiyo label roll.
*Muchina wekunyora wakazara unotora SUS304 simbi isina tsvina uye yakakwirira-simba aruminiyamu alloy kutevedzera cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS, uye CE.
Iyo drive roller inogadzirwa negoridhe simbi grit zvinhu, iyo ine yakakwirira kukweshera uye isingambotsvedza, ichiva nechokwadi chekugara kwechokwadi kweiyo label delivery function.Iyo yegoridhe grit inoshingirira kusapfeka, uye inokunda kutsvedza uye kumhanya kwechinyorwa kana rabha kana simbi zvinopfekwa zviri nyore.Chikamu chinoitika.
Muchina wekutsikisa unopisa: unotora yakakwira-kumhanya pneumatic coding, iyo yakanyanya kumhanya inogona kusvika ka500 paminiti.Iyo azimuth gadziriso inotora screw kugadziridzwa, iri nyore uye yakanakira manyore kugadzirisa.
Optional HP yakakwirira-resolution inkjet printer yekudhinda yepamhepo yezvikamu zvitatu zvekodhi
1-20ml 7-20ml ampoules, vials, zvinwiwa zvemukanwa, uye zvimwe zvitete zvakatenderedza zvigadzirwa zvemabhodhoro, akakodzera midziyo yekukurumidza uye otomatiki kunyora uye kudhinda pakurongedza.
Container size dhayamita: Ф28-120mm
Speed 20-120Bhodhoro/miniti (zvichienderana nekukura kwebhodhoro uye kureba kwechinyorwa)
Labeler kururama ± 0.5mm
Zvakapfuura: Kutengesa Kutsva kweChina Nyowani Dhizaini Otomatiki Labeling System yePre-Yakazadzwa Jekiseni neAutomatic Combination Torsion Bar.
Zvinotevera: fekitari mutengo wakaderera China S-conning Vertical Labeling Machine
Syringe Assembly uye Labeling System, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Commercial Bottle Labeling Machine, Printer For Cosmetics Jars Bottles, Sticker Labeling Machine Manufacture, Plastiki Chisimbiso Machine,